Ungamfumana njani uYouTube ukuba ucebise iividiyo zakho? -YTpals
Icandelo elithi "Iividiyo ezicetyiswayo" kuYouTube
Ukuba ungumdali okhutheleyo kaYouTube, unganqwenela indawo kwicandelo likaYouTube elithi "Izindululo zakho". Kuyanika umdla ukuqaphela ukuba ikholamu "yeevidiyo ezicetyiswayo" kuYouTube inamaqela amathathu evidiyo:
a) Iividiyo ezine ezikhethwe ngokwealgorithm zomdali.
b) Iividiyo ezinxulumeneyo, eziziividiyo ezifanayo nezo zomdali.
c) Iividiyo ezicetyiswayo ezizividiyo ezisekelwe kumsebenzisi kaYouTube.
I-algorithm emva kweengcebiso zikaYouTube iqhutywa luluhlu lweemetrics. Oku kubandakanya ixesha lokubukela, imbali yokubukela, ukufaneleka, ukubandakanyeka kwevidiyo, kunye nokunye okuninzi. Njengomdali, kuya kufuneka uphembelele ezi metrics kwaye uphumelele indawo kwikholamu ethi "Iividiyo ezicetyiswayo". Nazi iindlela ezimbalwa zokwenza oko:
1. Bandakanya ababukeli bakho
Umgaqo kabhontsi jikelele apha kukuba okukhona unxibelelwano luninzi lweevidiyo zakho, kokukhona ziya kucetyiswa nguYouTube kubabukeli abanokubakho. Ukudweliswa phakathi kweengcebiso zikaYouTube, kuya kufuneka wenze iividiyo ezibandakanya iividiyo zakho, oko kuthetha ukuba kufuneka bathambekele ekuthandeni kwaye banike izimvo kwiividiyo zakho. Basenokuba sele besenza njalo, kodwa kufuneka uqiniseke ukuba babandakanyeka kwinqanaba elinzulu ngakumbi. Zibekele usukelo kwaye uqalise iividiyo zakho ngomnxeba ocacileyo wokuthatha isenzo. Yenza ababukeli bakho baphendule imibuzo kwaye ubanike ithuba lokucela umxholo.
2. Lilumkele ixesha lokubukela iividiyo zakho
Abanye abadali bakaYouTube badla ngokuba neziphelo ezikhawulezileyo, ngaphandle kokushiya impembelelo enkulu. Kodwa i-algorithm emva kweengcebiso zeYouTube ilandela iseti yemiyalelo eyahlukileyo. Iividiyo ezigcina abasebenzisi bakaYouTube bekwiqonga ixesha elide zifikelela kuluhlu lweevidiyo ezicetyiswayo ngokukhawuleza kunezo zikhupha ngokukhawuleza. Ke, kuya kufuneka unikele ingqalelo kwinkqubo yakho yokuphucula ividiyo. Umxholo wakho kufuneka ubonakale, kwaye kufuneka ubandakanye abasebenzisi ngendlela yokuba bachithe ixesha kungekuphela kwiividiyo zakho kodwa nakwinethiwekhi yoluntu. Ukuqonda ngcono indlela oqhuba ngayo umxholo wakho, sebenzisa uhlalutyo lweYouTube, apho uya kufumana izixhobo ezininzi kunye nezixhobo zokukwazisa malunga nokugcina umbono wakho kunye nobude beseshoni.
3. Jonga izihloko zevidiyo yakho
Iividiyo zakho zinokufika kuluhlu lweengcebiso zikaYouTube ukuba izihloko zazo zilungiswe kakuhle. Isihloko sevidiyo yakho kufuneka ibesisimbo sokucofa ukutsala abantu abacofayo, uhambelane ne-algorithm yeYouTube ukuqinisekisa ukufaneleka, kwaye kufuneka ibekwe phezulu kwiziphumo zokukhangela zikaYouTube. Izihloko zakho zevidiyo kunye ne-thumbnails yevidiyo kufuneka ithathe ingqalelo ukufumana ucofa ngakumbi. Eyona ndlela ilungileyo yokubamba iliso le-algorithms kukuba uthe ngqo kangangoko kwisihloko sakho sevidiyo. Bandakanya igama lenkqubo yakho, inombolo yevidiyo, kunye negama lesitishi kwisihloko sakho sevidiyo ukuze ube sethubeni lokubamba indawo kuluhlu lweevidiyo ezicetyiswayo.
4. Nqakraza kwi-bandwagon yeentsingiselo
Uninzi lweengcebiso zikaYouTube ziyafana neevidiyo ebezibukelwe ngaphambili. Kungenxa yoko le nto abadali beYouTube bethanda ukuza nomxholo ofana nemixholo yabo. I-algorithm yeqonga idibanisa zonke iividiyo ezinxulumeneyo kunye kwaye iyabacebisa kubabukeli ababonise ukukhetha kwiividiyo ezinjalo. Ababukeli bahlala besebenzisa iinguqulelo ezahlukeneyo zeevidiyo phantsi kwe-niche ethile. Baza kutsalwa kwividiyo yakho ukuba isitayile sayo siyafana nale bayithandayo. Ke, kuya kufuneka utsibele kwindlela yevidiyo yamva nje ukuze uvuse uchulumanco lwababukeli bakho kwaye ubonise iividiyo zakho kuluhlu olucetyiswayo.
Ezi zingentla zezinye zeendlela onokuvela ngazo kuluhlu lweengcebiso zikaYouTube. Inkqubo yokufumana udumo kwiYouTube yinkqubo eqhubekayo, kwaye kufuneka uhambelane nemizamo yakho. Amathuba akho okufumana indawo kwizindululo zikaYouTube aphezulu xa umxholo wakho ubandakanya. Qinisekisa ukuba iividiyo zakho zithetha ngophawu lwakho ngendlela entle kwaye wenze ixabiso kubaphulaphuli bakho. Xa usenza njalo, ngokuqinisekileyo utsala umdla kaYouTube.
Ababhalisi beYouTube mahala, UYouTube uthanda - ukuba ezi zivuse umdla wakho, ngoko ke iiYTpals zinokukunceda. Qhagamshelana nathi namhlanje.
Ungamfumana njani uYouTube ukuba ucebise iividiyo zakho? ngababhali beYTpals, 4 Novemba 2021